ALAKAMISY 19 JOLAY 2018
LALAO ARA-PANATANJAHANTENA AN-TSEKOLY : Nametraka loto tao Mahajanga ireo mpianatra
Tamin’ny faran’ny herinandro teo no nifarana ny lalao nasionaly ara-panatanjahantena an-tsekoly tamin’ity taona ity izay natao tao Mahajanga. 30 août 2017
Ny alatsinainy dia efa nody any amin’ny faritra misy azy avy ireo mpianatra ireo.
Mpianatra an-jatony mahery no tonga tany an-toerana nandray anjara tamin’ny lalao fifaninanana. Maro ireo toerana nipetrahan’izy ireo teto ary anisan’izany ireo sekolim-panjakana lisea Philibert Tsirananan ny CEG Marocoz ary ny CEG Charle Renel .
Taorian’ny fotoana nialan’ireo mpianatra tao amin’ireo sekoly nametrahana azy ireo dia tsy nandray anjara tamin’ny fanadiovana ny toerana nitobiany izy ireo fa nametraka loto dia lasa. Noraisin’ny kaominina Mahajanga an-tanana ny fanadiovana ny toerana rehetra nisian’ireo mpandray anjara .
Tamin’ny nandalovanay teny amin’ireo lisea sy CEG ireo dia mbola miparitaka eny an-tokontanin-tsekoly ny latabatra sy seza nampiasan’ireo mpianatra ireo. Eo ihany koa ny kitay tsy lany nampiasain’ireo mpianatra. Mbola tsy manomboka araka izany ny asa fandaminana sy fanadiovana ataon’ny kaominina amin’ny toerana izay nampiantranoana ireo mpianatra nandray anjara tamin’ny lalao nasionaly teo iny.
Andrasana araka izany ny fiantombohan’ny asa fanadiovana satria dia efa miroso amin’ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra ny mpitantana ireo sekoly ireo,ka rariny sy hitsiny raha hivantana tontolo madio ireo mpianatra.
Milaza ny handray andraikitra ny minisitra Horace Gatien FIKATSOAN’NY FANABEAZANA (152) 13 juillet 2018 Manao fanamparam-pahefana ny kaomandin’ ny borigadin’ny zandarimaria AMPANEFENA- VOHEMAR (116) 13 juillet 2018 « Ndao isika hifanome tanana hitondra fanavaozana ho an’i Madagasikara » KARDINALY TSARAHAZANA TANY TOAMASINA (92) 13 juillet 2018 Miisa 11 ny namoy ny ainy, 31 naratra mafy LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO BEZAHA (86) 17 juillet 2018 Dimy maty vokatry ny fifandonana teo amin’ny zandary sy ny dahalo FANAFIHAN-DAHALO TAO IVOHIBE (86) 17 juillet 2018 Afaka madiodio ilay mpanabe voarohirohy VOLAMENA 20 GRAMA VERY TANY AM-PIANARANA (85) 18 juillet 2018